दुई (कृष्णप्रसाद र बाबुराम) भट्टराईको एउटा कथा - Jhilko
‘किसुनजी’ उपनामले बढी परिचित नेताको नाउँ चाहिं कृष्णप्रसाद भट्टराई हो । उनका बाजे खलकहरु नेपालका राजाका दरबारिया पुजारी थिए । उनको पुख्र्यौली घर गोरखा जिल्ला हो । दरबारमा हुने गडबडीमा परेपछि उनको परिवार पनि काँशी (वनारस) वासी भए । कृष्णप्रसाद उतै जन्मे हुर्के बढे । भारतमा त्यतिखेर अंग्रेजको शासन चल्दथ्यो । अलि ठूलो भएपछि किसुनजी अंग्रेज विरोधी आन्दोलनमा लागे ।
यता नेपालमा चाहिं राणा शासन थियो । उनले राणा सरकारको मूलोच्छेदन गर्न पर्ने ठह¥याए र वी.पी. कोइराला, सुवर्ण शमशेरहरुसँग मिलेर नेपाली कांग्रेस पार्टी खोले । यो वि.सं. २००६ साल चैत २७ गते कलकत्ताको कुरा हो । सुवर्ण शमशेर धनीमानी थिए । कलकत्तामा रहेका राणाखलक महावीर शमशेरको टाइगर सिनेमा हलमा भएको भेलाले कांग्रेस पार्टी गठन ग¥यो ।
काङ्ग्रेस पार्टी गठन भए लगत्तै राणा विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह भयो । त्यही विद्रोह सफल भएपछि २००७ साल पागुन ७ गते प्रजातन्त्रको घोषणा भयो । त्यतिबेलाका राजाहरुले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहेनन् । विसं २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले संसदको चुनाव गराए । यो चुनावमा कांग्रेसले दुई तिहाइ सिट जित्यो । किसुुनजी चाँहि आफू नै पुख्र्यौली थलो गोरखाबाट चुनाव हारे । चुनाव हारे पनि वी.पी.ले उनको योग्यताको कदर गर्दै संसदको सभामुख बनाइदिए । वि.सं. २०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गरे । वीपीसहित थुप्रै कांग्रेसीलाई जेल हाले ।
राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा पञ्चायत व्यवस्था लागू गरे । किसुनजी पनि जेल परे । वीपी जेलबाट छुटेर भारत गए । तर किसुनजी भारत गएनन् । उनी नेपालमै बसेर गान्धिवादी क्रान्ति गर्नु पर्छ भन्थे । पछि ०३३ सालमा वीपी पनि ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति’ लिई नेपाल फर्के । ०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन उठ्यो । राजा वीरेन्द्रले पञ्चायत र बहुदलकाबीचमा जनमत संग्रह गराए ।
पञ्चायतले २४ लाख र बहुदलले २० लाख ल्याएको तथ्याङ्क देखाएर पञ्चायतलाई जिताइयो । त्यसपछि ०४६ सालमा काङ्ग्रेस र बाम मोर्चा मिलेर पञ्चायतको विरोधमा संघर्ष गरे । पञ्चायतले ५० दिनमा घँुडा टेक्यो । राजा वीरेन्द्रले बहुदलको घोषणा गरे । ०४७ सालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा किसुनजी नियुक्त भए । एक वर्षभित्रैमा उनले ०४७ सालको संविधान निर्माण गरेर राजामार्फत घोषणा गर्न लगाए । प्रधानमन्त्री हुनु अगाडिसम्म भान्जाको घरमा बसेका किसुनजीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जाँदा पुरानो पानी खाने माटोको सुराइ, छाता र एउटा टयाङ्का लिएर गएका थिए । ०४८ सालको आमचुनाउमा काठमाण्डौ निर्वाचन क्षेत्रबाट हारे । उनले लगेको त्यहि सुराइ, छाता र ट्याङ्का लिएर बालुवाटारबाट निस्के ।
यसपछि भने किसुनजी निकै निरास भए । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले पनि गिरिजा शैलीको विरोध गर्दै काङ्ग्रेस छोडे । ०५१ सालमा मध्यावधी चुनाउ भयो । कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सकेन । त्रिसंकु संसद बन्यो सरकार गठन विघटन भइ रहे । सुरुमा ठूलो दलको नाताले एमालेले सरकार बनायो । यो सरकार ९ महिनामा ढलेपछि पूर्व पञ्च सूर्यबहादुर र लोकेन्द्र बहादुरलाई काङ्ग्रेस एमालेले पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाए । ०५४ सालमा एमाले पार्र्र्टी पनि फुट्यो । त्यसपछि गिरिजाप्रसादले पहिले फुटेको माले र त्यसपछि एमालेसंग मिलेर सरकार बनाए ।
०५६ मा फेरि आम चुनाव भयो । कांग्रेसले किसुनजीको नेतृत्वमा चुनाव लड्यो । कांग्रेसले सामान्य बहुमत ल्यायो । किसुनजीले पहिलो पटक पर्साबाट चुवाव जिते । दोस्रो पटक उनी प्रधानमन्त्री चुनिए । त्यही सुराई, छाता र ट्याङ्का लिएर वालुवाटार छिरे । प्रधानमन्त्रीबाट हट्न बाध्य भएपछि फेरी त्यहि सामान लिएर फर्किए ।
०५८ मा राजा वीरेन्द्रको वंश नास भयो । ज्ञानेन्द्र राजा भए । होलेरीमा माओवादी विरुद्ध तत्कालीन शाही सेना परिचालन गर्न नदिएपछि गिरिजाले राजीनामा दिए । शेरबहादुर प्रधान मन्त्री बने । शेरबहादुरले संसद विघटन गरेपछि विस्तारै राजाले अधिकार लिँदै गए । ०६३ वैशाख १० गतेसम्म राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन चल्यो । यसबीचमा किसुनजीले कांग्रेस छोडिसकेका थिए । ललितपुरको बोडे आश्रममा उनको अन्तिम दैनिकीहरु सन्तमहन्त झैं विते । जिन्दगीभर सक्रिय राजनीति गरेका किसुनजीको अन्तिम दिन कुनै सन्तको झैं एकान्तवासमा वित्यो । ०६७ फागुन २१ गते उनको मृत्यु भयो ।
किसुनजीको सक्रिय राजनैतिक जिवनकै समयमा गोर्खा जिल्लाकै त्यो पनि भट्टराई बाहुनकै घरमा १८ जुन १९५४ मा वालक बाबुराम जन्मेका थिए । उनी एसएलसीमा बोर्ड प्रथम भएपछि उनको नाम चल्न थाल्यो । कहिल्यै दोस्रा नभएका उनले इन्जिनियरिङ गर्दै विद्यावारिधि गरे । अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी संघमार्फत नेपाली राजनीतिमा लागेका बाबुराम ०४६ सालको आन्दोलनमा आइपुग्दा आन्दोलनको एक घटक संयुक्त राष्ट्रिय जनान्दोलन संयोजन समितिको प्रवक्ता थिए । ०४८ सालमा मशाल, विद्रोही मसाल र सर्वहारावादी श्रमिक संगठनको एकीकरण पछि बनेको एकता केन्द्रको नेता बने र त्यसको खुल्ला संगठन संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्ष भए । ०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा यो मोर्चाले ९ सिट जितेको थियो । तर, ०५१ को मध्यावधि निर्वाचन यसले बहिष्कार ग¥यो । २०५२ फागुनमा ४० सूत्रीय माग राख्दै मोर्चा पनि मातृ पार्टी नेकपा (माओवादी) संगै जनयुद्धमा गयो ।
जनयुद्धको समयभरि बाबुराम राजनैतिक विवादमा तानिए । अन्ततः २०६२ असोजको चुनबाङ बैठकमा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को कार्यदिशा पारित भएपछि उनी स्थापित भए । चुनबाङको त्यहि निर्णयलाई टेकेर सात राजनैतिक दलसंग ०६२ मंसीर ७ गते बाह्रबुँदे समझ्दारी भयो । त्यहि समझदारीको जगमा भएको दोस्रो जनान्दोलनले करिव अढाई सय वर्षको इतिहास भएको राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो । दोस्रो जनान्दोलनका ‘आर्किटेक्चर’ नेपालको प्रधानमन्त्री भए । संविधानसभा निर्वाचनपछिको पहिलो सरकारमा यिनी अर्थमन्त्री थिए । अर्थ मन्त्रालयको कार्यभारलाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरेकोले लोकप्रिय मानिएका थिए ।
राष्ट्रिय सहमतिको पाठ्यक्रम घोक्दै आएका यी कान्छा भट्टराईले परीक्षा दिँदा बहुमतीय विषयको दिए । जनान्दोलनका सहयात्रीसंग सहमतिको कुरा गर्ने कान्छा भट्टराईले मधेसी मोर्चाको टेको समाए । जेठा भट्टराई सुराई, छाता बोकेर लोकप्रिय भएका थिए । कान्छा भट्टराई विदेशी गाडी बहिष्कार गरेर नेपाली गाडि ‘मुस्ताङ’ चढेर लोकप्रिय हुन खोजेका थिए ।
कान्छा गम्भीर छन्, अन्तरमुखी छन् । जेठा हल्का र बहिर्र्मुखी थिए । कान्छा भट्टराई बोलेर विवादमा पर्छन तर जेठा भट्टराईले बोल्दा सबैलाई हँसाउथे । जेठा भट्टराई उन्मत्त हाँसो निकाल्थे, कान्छा यस्तै सयकडा दुई प्रतिशत जति हाँस्दा हुन । जेठा पानमसलाले कालो भएका बत्तिसा देखाएर हाँस्थे । कान्छाको दाँत आजसम्म परिवार बाहेक कसैले देखेका छैनन् होला । दुवै भट्टराई एक अर्का विरोधी विचारका थिए ।
जेठा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्थे । कांग्रेसले हतियार उठाउँदा पनि उनले विरोध गरे । विदेश बसेर आन्दोलन गर्ने विचारका विरोधी थिए । कान्छाले सशस्त्र विद्रोह नै गरे । १० वर्षसम्म बम बारुद खेलाए । तर अन्ततः उनले पनि बाटो मोडे । कम्युनिष्ट पार्टीलाई संविधान घोषणा भएको अघिल्लो दिन नै सदालाई तिलाञ्जली दिए । १२ जुन २०१६मा नयाँ शक्ति नामको पार्टी गठन गरे । पार्टीको संयोजक बने । उनको पार्टीको पाँच ‘स’ वाला सिद्धान्त छ । कुनै बेला गान्धी बन्ने भनेर नथाक्ने यी कान्छाले नेहरुको बाटो समाए । आफैले बनाएको संविधानको विरोधमा उत्रिन मधेस झरे ।
पहिलो आम चुनाउमा एमाले–माओवादी गठबन्धनमा जान राजी भए । तर, एकसाता नवित्दै बाम गठबन्धन छोडेर कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक गठबन्धनमा गए । गोर्खाबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हराउँदै सांसद चुनिए । चुनावकै बेलामा यिनको नजिकका राजनैतिक नातेदारले झट्का दिए । धेरैले यिनको पार्टी छोडे । यिनी घुम्न माहिर छन् । विदेशमात्र होइन भर्खरै यिनले मध्यपहाडी लोकमार्गको मेचीकाली छिचोले । पाँचथर च्याङ्थापुदेखि महाकालीको झुलाघाटसम्म कैंयौ सभाहरु गरे ।
जेठाले विवाह गरेनन । नातेदारलाई राजनीतिमा पनि ल्याएनन् । कान्छाका जहान परिवार छन् । पत्नी हिसिला पार्टी राजनीति र छोरी मानुषी युवा विद्यार्थी राजनीतिमा छिन । कान्छाको उत्तराधिकारी निस्किसकेका छन् ।
जेठा भट्टराई गीतामा विश्वास गर्थे । कान्छा माक्र्सवादको भाष्यमा हरदम त्रुटी केलाउँछन । छिद्रबाट छिर्ने राजनैतिक दर्शन निकाल्छन् । जेठा र कान्छा दुबै पार्टी पीडित थिए । पार्टी भित्रका ‘दलित उत्पीडित’ भएरै रहे । संगठनबाट सिमान्तकृत पनि थिए । जेठालाई पार्टीले कहिल्यै सघाएन । अन्ततः उनी काङ्ग्रेसबाटै अलग भए । कान्छाको हालत पनि त्यस्तै थियो ।
कान्छाले ‘धोविघाट’ बैठक गरेर प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो नाम उतिबेला बल्लतल्ल चढाएका थिए । उनी आफूलाई एकलव्य ठान्छन् । द्रोणाचार्य को हो उनलाई नै थाहा छैन् । जेठा भट्टराईले प्रधानमन्त्री बन्न बाबुरामले जस्तो ‘धोवी बैठक’ गरेनन् । जेठा भट्टराई नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने कुरा गर्थे । मेलम्चीको पानीले काठमाण्डौ धुने कुरा गर्थे । यो काम नहुँदा एक्लो वृहस्पति भएको दुःखेसो गर्थे । रक्सी खान सांसद भएको मजाक पनि गर्थे । आफ्नो विहे नभएको तर कुमारत्व पनि नरहेको हाकाहाकी बोल्थे । उनी मस्तमौलाना थिए । कान्छा भट्टराई पनि बोल्नलाई चाहिं मुफट नै छन् । उनले एमालेलाई लिङ्ग नछुट्टिएको पार्टी भने । उनी राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने कुरा गरिरहन्छन् । प्रधानमन्त्री हुँदा ‘शान्ति, संविधान र राहत’ दिने कुरा गर्थे । के के दिए जनताजनार्दनलाई थाहै होला । उनलाई परबाट चिन्नेहरु हर्फनमौला झैं मान्छन । उतिबेला नजिकबाट चिन्ने उनको पार्टीका वैद्यहरु त्यतिबेलै संशोधनवादी ठान्थे ।
दुबैको केही मानेमा समानता पनि छ । दुवै अध्ययनशील हुन् । दुबै गोर्खा पुख्र्यौली थातथलोका हुन । दुबै दरबारका पुजारी खलकका सन्तान हुन । दुबै पत्रकारिताको माध्यमबाट उदाएका पात्र हुन । कान्छा भट्टराईले जनादेश, झिल्को आदि पत्रिकाको लामो समयसम्म सम्पादन गरे । जेठा भट्टराई नेपाल पत्रकार संघको संस्थापक सभापति नै हुन ।
प्रदेश २ मा महिला असुरक्षित बन्दै, सिरहामा महिलालाई जलाएर हत्या प्रयास
मोदीद्वारा बनारसबाट उम्मेदवारी दर्ता
आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरमा सङ्कलन हुने राजश्वको अधिकांश हिस्सा मदिराले धान्ने...
भृकुटीमण्डपमा नेकपाको चियापान (फोटोफिचर)
चियापान कार्यक्रम काठमाडौंको भृकुटीमण्डमा बुधबार आयोजना भएको हो । दिउँस १२ बजेदेखि...
काठमाडौं उपत्यकामा रगत अभाव
वर्षेनी चाडबाड र चाडबाडपछिको समयमा उपत्यकामा रगतको अभाव देखिने गर्छ । यसलाई सम्बोधन...